Network ကိုအင်ဖို II ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Network ကိုအင်ဖို II ကို
Network ကိုအင်ဖို II ကို APK ကို
2.1 + "ကွန်ယက်အင်ဖို" ၏ဗားရှင်း
ဖုန်းနှင့်လက်ရှိကွန်ရက်က, Bluetooth IPv6 နှင့်ဆဲလ်ဆက်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်ပြသထားတယ်။
ဒါဟာအစသင့်ရဲ့ပြင်ပ public / အိုင်ပီ & host name ကိုပြသသည်။
သာ (အောက်တွင်မှတ်စုကိုကြည့်ပါ) အရဖြေရှင်းရန်အများပြည်သူ IP ကိုငါ့ကိုယ်ပိုင် server ကိုမှတဆငျ့ http://aschillings.co.uk/myscripts/getip.php နှင့်အဝေးမှထိန်းချုပ်ကဖြေရှင်းမှ On-line ကိုတတ်၏။ ကနဦးလျှောက်လွှာလည်း server ကိုအဆက်မပြတ်ချကဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်ဖြစ်ဟန်အဖြစ်, whatismyip.org သုံးပြီးပေမယ့်ခဲ့သည်။
>> ပြန်ကြားရေး << ပြသ
• Device ကိုအိုင်ပီနဲ့ host name ကိုပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူနှစ်ဦးစလုံး။
•လက်ရှိမိုဘိုင်းဆဲလ်များနှင့်မည်သည့်အိမ်နီးချင်းများ, သူတို့ရဲ့ signal ကိုအစှမျးသတ်တိ, တည်နေရာအချက်အလက်များနှင့်အမျိုးအစားနှင့်အတူ။
IMSI / ရဲ့ IMEI •။
•လက်ရှိမိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေး (စသည်တို့ကို MCC + MNC, လက်ရှိ connection ကို) အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်
•ယင်းက Android device ကိုထူးခြားတဲ့ ID ကို။
• (စတာတွေရဲ့ MAC, လက်ရှိ SSID နှင့် BSSID, link ကိုအမြန်နှုန်း, အိုင်ပီ / Netmask, Gateway မှာ, DNS ကိုနှင့် DHCP ဆာဗာများ, စ) Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက်များ
သင့်ရဲ့ကွန်ယက်ကိုအိမ်နီးချင်းများပေါ်တွင်အခြေခံအန်းဒရွိုက်နှင့်အညီသင့်ရဲ့လက်ရှိတည်နေရာ•။ အဘယ်သူမျှမ GPS စနစ်လိုအပ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသည်။
•ဘလူးတုသ်အခြေအနေ, လက်ရှိဘလူးတုသ်ကွန်နက်ရှင်ကို (s) နှင့်အတိတ်ဒဿနိကဗေဒနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. ပြန်ကြားရေး။
•အားလုံး device ကို interfaces များအတွက် IPv6 စက်ကိရိယာနှင့် Router က IP လိပ်စာများ (ဒီယခုအခါလူတိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်သင့်တယ်, မှတ်စုကိုကြည့်ပါ) ။
>> မှတ်စုများ <<
•ဤ 2.1 က Android API ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးပိုပြီးဖုန်းများကိုထောကျပံ့ဖို့ '' ကွန်ယက်အင်ဖို '' လျှောက်လွှာတစ်ခုတိုးချဲ့ဖြစ်ပါသည်။
•ငါသာ GSM / UMTS ဖုန်းကိုရှိသည်။ ရယ်စရာဘာမှမဆိုအခြားဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်ဖြစ်ပျက်လျှင်ငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်ငါက fix ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
•ဤလျှောက်လွှာ (http://aschillings.co.uk/myscripts/getip.php နှင့် http://aschillings.co.uk/myscripts/gethostname.php သုံးပြီး) သာသင့်ရဲ့ပြင်ပ IP ကို ​​/ hostname ဆွဲယူဖို့ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ် ။ အဘယ်သူမျှမကအခြားသတင်းအချက်အလက် (ငါ၏အရေးမူဝါဒအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတည်ရှိသည်) ကိုစေလွှတ်နေပါတယ်။
•သင်ချင်တယ်ဆို bug တွေသို့မဟုတ် features တွေအကြောင်းကိုငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောစျေးကွက်မှတ်ချက်များကိုမမွငျနိုငျပွီးတစ်စုံတစ်ဦးကမှတ်ချက်မသောအခါငါအကြောင်းကြားမဟုတ်ဘူး။
•ယင်း IPv6 တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယခုလူတိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ကြောင်းသင်တို့အဘို့အမှုမပါရှိလျှင်, (aschillings.dev@gmail.com) ငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ဒီတော့ငါက fix ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်စျေးကွက်ကနေ 'အပါးပျဉ်းလက်အောက်တွင်' 'ဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့်ပို့ကုန်ကနေတဆင့်ငါ့ကိုရလဒ်ပေးပို့ပါ။
•သင်တစ်ဦး MAC address ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ရောင်းသူကိုပြစျေးကွက်ကနေ '' ရဲ့ MAC (OUI) ဒေတာဘေ့စ '(ငါ့ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်) ကို download လုပ်ပါနှင့် OUI ဒေတာဘေ့စများ၏မိတ္တူကို download လုပ်ပါကအသုံးပြုချင်လျှင်။
•ဗားရှင်း v0.5.2 ခုနှစ်တွင်ငါသည်ငါ့ဆာဗာကဖြေရှင်းပြီးအဖြစ်သင့်အများပြည်သူ hostname ဖြစ်သည့်ဝေးလံခေါင်သီ hostname resolution ကိုကဆက်ပြောသည်။ စံချိန်တင်ဝါဒဖြန့်နှောင့်နှေးသို့မဟုတ်သင့် DNS Server ကို (ဒေသခံတစ်ဦး hostname အဖြစ်သူတို့ရဲ့ပြင်ပလိပ်စာဖြေရှင်းရာအချို့အိမ်ပြန် router များကဲ့သို့) လဲလျောင်းနေသည်လည်းမရှိမဟုတ်လျှင်ဒါဟာသင့်ရဲ့ပြင်ပ hostname ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်သင့်သည်။ အကြှနျုပျ၏ server ကိုသငျသညျတူညီသော DNS ဆာဗာကိုသုံးပါလျှင်ဒီတော့ဒီစိတ်မချရပါလိမ့်မည် 1and1 အားဖြင့်တည်ခင်းဧည်ဖြစ်ပါတယ်။
• '' Ext ။ hostname (L ကို) 'သင့်ရဲ့ device ကိုသင့်ရဲ့ပြင်ပ IP ကို ​​(ဒေသခံသန်နိဋ်ဌာနျ) .n ဖြေရှင်း hostname ဖြစ်ပါတယ်
• '' Ext ။ hostname (R) 'ငါ့ server ကိုသင့်ရဲ့ပြင်ပ IP ကို ​​(ဝေးလံခေါင်သီသန်နိဋ်ဌာနျ) ဖြေရှင်း hostname ဖြစ်ပါတယ်။
• '' ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှု '' HTC ဖုန်းများတွင်တပ်ဆင်လာတစ်ဦးက hidden application ဖြစ်ပါတယ်။ ကို 'ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှု' 'သင်၏ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ပြုလုပ်လျှင်မီနူးကို item သာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Samsung က devices တွေကိုအိမ်နီးချင်းဆဲလ်မပြကြဘူး။ ဤသည်ကို Samsung ရဲ့ Android အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးငါလုပျနိုငျဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။
>> Privacy ဖော်ပြချက် <<
ငါတိုက်ရိုက်နှင့်ထူးခြားဖော်ထုတ်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ကိရိယာသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသူတစ်ခညျြနှောငျနိုငျသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းကြပါဘူး။ သင်သည်သင်၏ပြင်ပ IP address ကို retrieve လိုက်တဲ့အခါ, ငါ့ server ကိုသင်တစ်ဦးဘရောက်ဇာကိုသုံးပြီးငါ့အ server ပေါ်တွင်စာမျက်နှာသင် browse လျှင်အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ထားတဲ့စံက်ဘ်ဆိုက် "hit" log ပါလိမ့်မယ်။ အခြားအချက်အလက် logged သို့မဟုတ်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်မရှိပါ။
မည်သည့် bug တွေ / ပြဿနာများ / အင်္ဂါရပ်တောင်းဆိုမှုများနှင့်ငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ငါခက်ခဲ debugging လုပ်နိုင်သည့်ဈေးကွက်မှတ်ချက် reply မရပါဘူး။
အားလုံး interfaces အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မဆံ့တံ့သော Interfaces Tab ကိုကဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ application ကိုယခုကိရိယာရှိသည်ပါဘူးစွမ်းရည်နှငျ့ပတျသကျသော tabs များလွှဲမည်။
အသုံးပြုသူများသည်ယခုသူတို့ Preferences ကိုကနေတဆင့်မလိုအပ်ပါဘူး tabs များဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Refactoring Gallore ။
DB ကို update တဲ့အခါမှာလေယာဉ်ပျက်ကျ Fixed ။
အိုင်ပီ Tools များ - Router ...
NetMonitor ဆဲလ် ...
HMA VPN ကို Proxy & ...